Delta ekpughere ọnụ ụlọ TSA Precheck raara onwe ya nye, dobe akpa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Delta ekpughere ọnụ ụlọ TSA Precheck raara onwe ya nye, dobe akpa
Airlines • Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Delta ekpughere ọnụ ụlọ TSA Precheck raara onwe ya nye, dobe akpa.
Ahụmịhe nkwado ihu ọhụrụ na Atlanta na-enye mma na-enweghị aka na ngwaọrụ maka ndị njem site na mgbochi ruo n'ọnụ ụzọ ámá.
Ịga njem site na Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport ga-adị mfe ọbụna maka ndị ahịa Delta debanyere aha na TSA PreCheck malite n'ọnwa na-abịa.
Lines Delta Air na-emepe ebe mgbaba Delta-TSA PreCheck express nke mbụ.
Ndị ahịa nwere ma ngwa Fly Delta yana otu TSA PreCheck ga-enwe ike ịga leta ebe nchekwa akpa ọhụrụ raara onwe ya nye na ọkwa dị ala nke Atlanta's Domestic South Terminal.
Delta Air Lines mara ọkwa na malite n'ọnwa na-abịa, na-agabiga Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport ga-adịrị ndị ahịa Delta mfe maka ndị ahịa Delta debanyere aha na TSA PreCheck, na mgbasawanye nke ikike ihu ihu ọhụrụ yana mmeghe nke mbụ Delta-TSA PreCheck express lobby and bag drop.
Ndị ahịa nwere ma ngwa Fly Delta na ndị otu TSA PreCheck ga-enwe ike ịga leta ebe a na-edebe akpa ọhụrụ raara onwe ya nye na ala dị ala nke Atlanta's Domestic South Terminal, gafere ebe nchekwa, wee banye ụgbọ elu ha n'ọnụ ụzọ ámá na-eji naanị ha. “njirimara dijitalụ” (nke ejiri nọmba Otu SkyMiles nke onye ahịa, nọmba paspọtụ na Nọmba Njem amara ama). Ndị ahịa nweere onwe ha ịga njem site na mgbochi gaa n'ọnụ ụzọ, aka kpamkpam na enweghị ngwaọrụ.
"Anyị chọrọ inye ndị ahịa anyị oge ka ha nwee ọ enjoyụ njem site na imeghe ahụmịhe dị mfe, enweghị nkebi na nke ọma site na nsọtụ ruo na njedebe," Byron Merritt, onye isi oche Delta nke Brand Experience Design kwuru. "Delta Air Lines abụrụla onye ndu n'anwale na itinye teknụzụ njirimara ihu kemgbe afọ 2018 dịka akụkụ nke ọhụụ anyị maka iwulite ọdụ ụgbọ elu na-enweghị ike. Mwepụta nke Atlanta's express lobby and bag drop bụ ihe kachasị ọhụrụ na ntinye aka anyị ige ntị na ime ọhụrụ maka ndị ahịa anyị. "
Nke a bụ ka ahụmịhe ọhụrụ Delta ga-esi mee ka ịfefefe site na ọdụ ụgbọ elu atọ dị na Atlanta: